Makedonia: Mikatona Ny Famoahana Mangarahara An-Tserasera ny Fahalotoan’ny Rivotra Ao Skopje · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Febroary 2012 15:43 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Shqip, srpski, русский, македонски, Español, 日本語, English
Araka ny nolazain'ny bolongan'ny ONG GreenBox, dia tsy liana amin'ny fanomezana vola hametrahana rafitra an-tserasera mampafantatra ny mponina ny haavon'ny taham-pahalotoan'ny rivotra misy ankehitriny ao an-tanàna ny fiadidiana ny tanànan'i Skopje.
Nampisy sahoan-dresaka, tamin'ny herintaona, ny nametrahana ilay rafi-pandrefesana ny fahalotoan-drivotra, naorina tao afovoan-tanànan'i Skopje, ka nahitana ny fa avo ny loton'ny rivotra voarefy hita teo.
Ny mpandinika sasany dia mahatsikaritra ny fisiam-bovoka PM10 miteraka homamiadana ao amin'ny fanorenan-trano miroborobo tohanan'ny fanjakana ao afovoan'ny monisipalite, izay nivadika ho toera-panorenana goavana amin'ny alalan'ilay tetikasa Skopje 2014. Ny toerana manodidina ihany koa dia ketrehin'ny antsoina hoe “mafia an-tanàna” fatratra izay mampiasa ny fahafantarany olona ao amin'ny governemanta hanova lalàna an-tanàndehibe hamadika ny zaridaina, ny kianja, ny tobim-piara ary ny trano bitika ho trano goavana natao ahazoam-bola, birao ary tranombarotra isan-karazany.
Nitsahatra tsy nandeha intsony hatramin'ny fanombohan'ny volana Janoary 2012 (1, 2; mk) ny rafitra an-tserasera “Fisefoana Skopje” [mk], fananan'ny Tanànan'i Skopje, rehefa nitatitra ny filazam-baovao maro (1, 2, 3, 4; mk) fa mbola ratsy hatrany ny rivotra. Ahitana izao takelaka izao ny vohikala: “Noankotrihina ny Rindrambaiko. Ho avy tsy ho ela indray ny Fampiharana.”
pikantsarin efijery ny rafi-panarahamaso ny Fisefoana Skopje, izay andalam-panamboarana hatramin'ny fiandohan'ny Janoary 2012.
Nandefa [mk] izao manaraka izao ny bolongana GreenBox:
Tianao ho fantatra ve ny kalitaon'ny rivotra ao afovoan-tanànan'i Skopje? Tsy maintsy mitafy ny kiraro fanao amin'ny ranomandry, parka, satroka, fehintenda ary fonontanana ianao dia mitsidaikadaika mandrapahatonga eny amin'ny Lalana Makedonia dia mijery ny fampafantarana hita eo akaikin'ny tsangambato Šmizla [mitovitovy amin'ny Valley Girl na Barbie]. Mbola tsy mandeha moa ny vohikala “Fisefoana Skopje” izay mamoaka mivantana ny tarehimarika hatramin'ny Krismasy [fanisana taloha = 7 Jan], ary heverina fa tsy handeha rahatrizay.
Takelaka fandrefesana ny fahalotoan-drivotra (ankavanana), tsangambato Šmizla (ankavia). saripika GreenBox blog, nahazoana alalana.
Nanamafy ny Laboratoara momba ny tontolo iainan'ny orinasa Farmahem, izay nikarakara ny fitaovana nandritra ny herintaona, fa mihoatra noho izany fanankotrihina rindrambaiko izany ny raharaha. Tapitra ny fifanarahana ary tsy nanavao izany intsony ny tanànan'i Skopje. Heverina ho nitady fanatsarana ny rafitry ny tahirin-kevitra amin'ny marika isa mivoaka Farmahem, saingy mitodika any amin'ny fiadidiana ny tanàna, izay manapa-kevitra amin'ny ho avin'ny fitaovana an-tserasera, ankehitriny ny olona.
Tsy liana amin'zany fanohizana ny famoahana an-tserasera izany marika isa ny kalitaon'ny rivotra izany ny solontenan'ny tanànan'i Skopje. Nilaza ny mpitondrateny [ny tanànan'i Skopje] Nedelčo Krstevski fa noho ny fanapahankevitra sy ny finiavan'ny orinasa no nampandeha ny vohikala.
“Tsy antsika ny vohikala. Tsy afa-miteny izahay amin'izao fotoana izao hoe miankina aminay ve sa miankina amin'ny Farmahem izany. Ny zavadehibe ho anay dia mbola mandeha ny tobim-pandrefesana ary afa-mijery ny kalitaon'ny rivotra avy amin'ny marika asehon'ny fitaovana ny daholobe,” hoy i Krstevski.
Nanaiky ny solontenan'ny fiadidiana ny tanàna fa raha tiana ny hanohizana ny “Fifohana Skopje” dia tsy maintsy nangataka tolobidy ampahibemaso, araka ny lazain'izy ireo, izay manasaro-javatra sady mampiditra olo-tsotra. Tsy fantatry ry zareo izay mety hitranga.
“Tsy afa-miteny na inona na inona aminareo aho ny hoe mbola hisy ve sa tsy hisy intsony,” hoy i Krstevski.
Amin'ny alalan'ny “Fisefoana Skopje” no ahafantaran'ny olona ny fahalotoan'ny rivotra ao an-drenivohitra izay avy folo heny noho izay fetra farany ambony eken'ny lalàna. Lasa miafara amin'ny tsy tokony ivoahana ny trano fotsiny izao izany. Taorian'ny faneren'ny olona ny fiadidiana ny tanàna sy ny minisiteran'ny tontolo iainana handefa mpisafo ny manodidina ny orinasa dia nidina vonjimaika ny taham-pahalotoana. Araka ny fikarohana [mk] nataon'ny Ivotoeram-Pahasalamam-Bahoaka dia afaka manaisotra fahafatesan'olona 117 sy trangan'aretina ratsy dia ratsy 420 isan-taona i Skopje raha mihena ampahatelon'ny misy amin'izao fotoana izao ny fiandronam-bovoka.
Soratra miverina: Makedonia: Mitohy Ny Raharaham-Panarahamaso Ny Fahalotoan-dRivotra ao Skopje · Global Voices teny Malagasy
[…] Nitsahatra tsy nanome vaovao an-tserasera intsony nanomboka hatramin'ny fiandohan'ny taona 2… [mg] ny rafi-pandrefesana ny fahadiovan'ny [fahalotoan'ny] rivotra tao an-drenivohitra Makedonianina. Ela loatra ny fandraisan'ny fiadidiana ny tanàna ny andraikiny, ka niteraka fahatezerana teo amin'ny mponina ao an-toerana izany, izay naneho ny fisalasalany tamin'izay antony nanapahana ny fanatanterahana ity fomba mampiseho mangarahara ity. […]
03 Marsa 2012, 16:32